NuuralHudaa, Author at NuuralHudaa
NuuralHudaa 659 posts 1 comments
Manni Maree walii gala Dhimmoota Islaamaa caalbaasii iddoowwan naannawa masjiida Anwaaritti argaman…
NuuralHudaa	 Dec 12, 2018 0
Manni marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee iddoowwan naannawa masjiida Anwaaritti argaman, abbootii qabeenyaatti gurguruuf caalbaasii baasuu isaa gabaasuun keenna ni yaadatama. Xalayaa guyyaa hardhaa mana marii dhimmoota Islaamaa…
NuuralHudaa	 Nov 8, 2018 0
Tana Quba Qabduu? 002
NuuralHudaa	 Nov 3, 2018 0
Gosa biqiltootaa dachii tanarra jiru keessaa hedduun isaa eessatti akka argamu beeytuu? hedduun keenya biqiltoonni lafarratti qofa waan biqilan seena. inumaa irra hedduun biqiltootaa bishaan keessatti biqilu. Gosa biqiltoota dachii…
NuuralHudaa	 Oct 17, 2018 0
Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira. YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu…
NuuralHudaa	 Sep 28, 2018 0
Manni jireenyaa Mr Philipp Gillet Fransaay gama dhihaa moggaa magaalaa Nantes, qarqara laga Royer’tti argama. Mana namticha kanaa yoo kan seentan tahe, Jawween Cobra jedhamu minjaala Bunaa irra ciisee, Buutiin( Alligator) meetra 3 dheeratu,…
Ameerikaan Chaayinaa irra qoqqobbii keette
NuuralHudaa	 Sep 22, 2018 0
Mootummaan Ameerikaa ‘Yukreen weeraruufi Filannoo Ameerikaa keessa harka naqachuu’ sababaa jedhuun Raashiyaa irra qoqqobbii kaayee ture. Haa ta’u malee Chaayinaan qoqqobbii Ameerikaan Raashiyaa irra keette kana cabsuudhaan, dhiheenya kana…
NuuralHudaa	 Sep 8, 2018 0
Sabtii har'aa Asrii booda naannaawa sa'aa 11:00 magaalaa Mooyyalee ganda 02 kan Boolee jedhamuun beekamu keessatti walitti bu’iinsa uumameen, dhalattoonni Oromoo 3 rasaasaan kan dhahaman yoo tahu, namni 2 battalumatti du’ee tokko ammoo…
Ulamaa’onni gurguddoon Biyya Keeniyaa Keessa jiraataa turan gara biyyaa deebi’uuf qophitti jiru.
NuuralHudaa	 Aug 29, 2018 0
In shaa ALLAAH hayyama Rabbii guddaatiin Guyyaa jimaataa keeniyaa irraa ka’anii, Salaata Jum’aa booda Finfinnee ni gahu jedhamee eegama. Ulamaa’onni gara biyyaa deebi’uuf qophitti jiran. Sheikh Alii jimmaa Sheikh Muhammad Waadoo Dr.…
Simannaa Jila OMN magaalaa shaashamannee irratti yoo xiqqaate lubbuun nama 3 dabre.
NuuralHudaa	 Aug 12, 2018 0
Ummanni Magaalaa Shaashamannee Guyyaa har’aa Aktiiviistii fi Daayreektara OMN Obbo Jawaar Muhammad fi garee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork simatuuf kan bahan yoo tahu, Sababaa baay’ina ummataatiin balaa mudateen namni 3 du’uufi namoonni…
Guyyoota Kurnan Ji’a Zulhijjaa
NuuralHudaa	 Aug 11, 2018 0
Rabbiin wan barbaadeen kakata. wanti Rabbiin kakateen ammoo wan guddaa ykn jabaa tahu agarsiisa. Rabbiin Qur’aana isaatiin akkas jedha. "Bariin Kakadhe. Halkan kurnaniinis kakadhe" (Suuraa Fajr 1-2) Halkaan Rabbiin Qur’aana isaa…